Wasiirka Ganacsiga Oo Ganaax-lacageed Dul-dhigay Shirkad Caan Ah & Shaybaadhka Haamaha Kaydka Shidaalka Ee Berbera | Himilo Media Group
Wasiirka Ganacsiga Oo Ganaax-lacageed Dul-dhigay Shirkad Caan Ah & Shaybaadhka Haamaha Kaydka Shidaalka Ee Berbera
Hargeysa, 9 Meey, 2018 (Himilo) – Xukuumadda Somaliland ayaa shaacisay in Shirkad ka mid ah kuwa Shidaalka keena Dalku ay leedahay Shidaal wasakhaysan oo sababay inay fadhiistaan Gaadiid tiro badan oo kuwa Dadweynaha ah.
Shidaal wasakhaysan oo dhawaan lagu shubay Haamaha Kaydka Shidaalka ee Magaalada Berbera oo ay Maamulaan Shirkad gaar loo leeyahay, ayaa waxa lagu shubay Shidaal wasakhaysan, kaasi oo sababay in Gaadiidkii Dadweynaha ee loo adeegsaday Ciladoobaan oo ay fadhiistaan.
Wasaaradda Ganacsiga iyo Warashadaha Somaliland, ayaa shaacisay in Shidaalka dhibaatada badan gaadhsiiyey Gaadiidka Dadweynaha ay keentay Shirkad lagu Magacaabo Red sea, taasi oo ka mid ah Shirkadaha Somaliland keena Shidaalka, sidaasi darteedna Shirkaddaas iyo Shaybaadhka Shidaalka ee Berbera yaalla la dul-dhigay Ganaax Lacageed oo ciqaab looga dhigayo.
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha ee Somaliland Maxamuud Xasan Sacad (Saajin) oo Shalay Shir-jaraa’id ku qabtay Xafiiskiisa Hargeysa, ayaa sheegay in baadhitaan ay ku sameeyeen Cidda Dalka keentay Shidaalka wasakhaysan ee gaadiidka badan fadhisiiyey ku ogaadeen in Shirkad lagu Magacaabo Red sea tahay ta Shidaalkaa Dalka keentay, Shaybaadhka Shidaalkuna u ogolaaday in Shidaalkaa wasakhaysan lagu shubo Haamaha Kaydka Shidaalka ee Berbera.
Wasiirka oo Arrimahaa ka hadlayaana wuxuu yidhi “Markii aanu samaynay Baadhitaan dheeraad ah, waxaanu ogaanay Shirkadda Shidaalka ee Red Sea iyo Shaybaadhka shidaalka ee Berbera ay leeyihiin sababta.”
Wasiirka Ganacsigu wuxuu sheegay inay ogaadeen in Shirkadda Red sea ay shidaalka wasakhaysan soo iibsatay iyadoo og “In Shidaalka laga soo iibiyey Red Sea ay leedahay masuuliyadda, iyagoo ogaa inuu yahay shidaal Oksojiin leh iyo Shaybaadhka oo aan qabanin Masuuliyaddiisa, siiyeyna ogolaasho ah in Shidaalkaa lagu shubo Haamaha.” Ayuui yidh, waxaanu intaa ku daray oo uu ku dhawaaqay Ganaax ay ku soo rogeen “Sidaasi darteed labadoodaba waxa la taqsiiray taqsiir is-leeg oo midkiiba ah $ 355,500 dollar, waxaanan farayaa inay arrintaas si deg-deg ah u fuliyaan, kuna shubaan Lacagtaa Wasaaradda Maaliyadda, Wasaaradda Maaliyadduna waa inay daba-gashaa Arrintaa.”
Wasiirka Ganacsigu waxa kale oo uu Shirkiisa jaraa’id ku sheegay in Wasaaraddu ay meelaha Dalka laga soo geliyo raashinka, Dawooyinka iyo Alaabooyinka kale ay dhigi doonto Qalab lagu shaybaadho, Ciddii Dalka soo gelisa Alaab dhacdayna la ganaaxi doono.